Me RAZAFIMANANTSOA HANITRA : MANDOTO NY ENDRIKY NY FIRENENA NY MPITONDRA ANKEHITRINY – MyDago.com aime Madagascar
Manoloana ny toe-draharaha ankehitriny dia azo ambara fa voatohitohina ny fahaleovantenan’ny fitsarana « l’independance de la justice en péril ». Hoy ny filoha lefitry ny Antenimierampirenena sady solombavambahoaka voafidy tao amin’ny boriborintany voalohany raha nitafa taminay androany Alakamisy 06 Aprily 2017.
Momba ny raharaha Mbs dia gaga sy zendana aho hoy izy, mahita ny fanambaran’ny sekretera jeneralin’ny ministeran’ny serasera izay milaza fa tsy azo eritreretina intsony ny fisokafan’ny Mbs.Gaga aho satria amin’izao fotoana izao, efa ho roa taona lasa izay no eny ampelatanan’ny filankevim-panjakana ny fangatahana na « requette » izay mangataka ny hanafoanana fanapahankevitra na « annulation d’une décision » navoakan’ny ministeran’ny serasera.
Tamin’ny volana febroary 2015 dia misy fanapahan-kevitra navoakan’ny tale jeneralin’ny ministeran’ny fifandraisana (DG), izay milaza fa nofoanana ny licence ny Mbs, izany hoe nanomboka ny 2009 ka hatramin’ny 2015 satria izy no nanao sonia izany. Io fanapahankevitra io no nentin’ny mpisolovavan’ny mbs teo anatrehan’ny filankevi-panjakana izay mbola tsy nivaly hatramin’izao isika miteny izao. Gaga aho hoy ity solombavambahoaka ity ny amin’ny tsy fisian’ny fahaleovantenan’ny fitsarana « l’independance de la justice en péril ». Lasa ny sekretera jeneralin’ny ministeran’ny serasera amin’izao no misolo vava ny filankevi-panjakana satria tonga dia miteny fa tsy azo eritreretina ny hisokafan’ny Mbs. Fa iza moa izy no afaka miteny izany ? hoy ny fanontaniana napetrany. Efa eo ampelatanan’ny fitsarana ny raharaha hoy izy, ary misy fitarainana napetraka, noho izany lasa mieritreritra ny tena hanao « interpellation » ny ministry ny fitsarana satria rehefa manao fitarainana dia afaka miteny ny ministry ny fitsarana sy afaka mampiantso mpanao gazety raha misy fitarainana tonga eo ampelatanany araka ny nambarany.
Ny ministry ny fitsarana anefa no miantoka ny fahamarinan’ny fitsarana « garant de la justice », ary miantoka ny maha fanjakana tan-dalàna « garant de l’Etat de droit ». Amin’izao fotoana izao tsy misy intsony izany satria lasa ny ministry ny fitsarana indray no lasa miantoka izany ary lasa manery ny andrimpanjakana hafa handika lalàna. Tsy fahita erantany hoy ny Me Hanitra, izany hoe : ministry ny fitsarana no mangataka famotsorana olona na inona na inona tsy mety. Raha misy “vice de forme” dia ny mpisolovava no milaza izay tsy mety rehetra fa indrindra ilay zo amin’ny fiarovana “droit de la defense” , izay no anjaran’ny mpisolovava fa tsy anjaran’ny ministry ny fitsarana. Tokony mipetraka amin’ny toerana misy azy izy dia ny maha mpitahiry ny fitombokasem-panjakana azy. Raha sanatria misy tsy mety ny ataon’ny Bianco dia afaka torina ary misy dingana arahina mahakasika izany.
Tsy manana fahefana mahefa intsony ny fanjakana. Afabaraka ny firenena : demokrasia, ady amin’ny kolikoly, fanjakana tsara tantana, fanjakana tan-dalàna no tenenintsika lava eto fa inona ny anasokajiana ny fanjakana amin’izao?
Menatra ny tena mahatsiaro tompon’andraikitra amin’ny firenena hoy ny Me Hanitra fa fanjakana mikorontana “Etat desordres” no misy eto, samy manao izay tiany hatao ny rehetra. Vindicte poulaire, justice populaire, fitsarambahoaka ireny dia ny tsy fisian’ny fahefam-panjakana no mahatonga ireny. Tompon’andraikitra daholo isika fa ny minisitry ny fitsarana no tompon’andraikitra voalohany.
Misy zavatra azo amboarina fa firenena iombonana ity. Afabaraka isika manoloana ny olontsotra, ny olona entina, firenena ivelany. Mandoto ny endriky ny fanjakana sy ny firenena ny mpitondra ankehitriny.
Raha iverenako ny Mbs dia miantso (interpeller) ny ministry ny fitsarana aho fa hay azo atao ny mitaraina aminy. Mangataka aminy ny tenako fa “denie de justice” izao ataon’ny fitsarana izao izay tsy mamoaka ny didy momba ny Mbs. Lasa ny sekretera jeneralin’ny serasera no mamoaka ny didy. Mangataka amin’ny ministry ny fitsarana aho, avoahy ny didy amin’ny filankevi-panjakan, tsarao araka ny tokony ho izy ny raharaha.
Me Hanitra RAZAFIMANANTSOA : « tsy meloka ny Filoha Ravalomanana »
ANTOKO TIM : NANATITRA FEHEZAM-BONINKAZO TENY AMBOHIJATOVO
Auteur Solo Razafy*Publié le 6 avril 2017 6 avril 2017 Catégories Politique
1 réflexion sur « Me RAZAFIMANANTSOA HANITRA : MANDOTO NY ENDRIKY NY FIRENENA NY MPITONDRA ANKEHITRINY »
rabenja dit :
le vieux zanô de madagate devrait fermer sa gueule, ou bien qu’il nous prouve si Rajoelina ou Le Hery « colonisé ont fait mieux que Ravalomanana qu’il dit etre un demagogue.
Zanô…il faut etre soi meme sous la colonisation pour ne pas se rendre compte que des milliers d’enfants ou jeunes, ont perdu le sens de l’education. Rajoelina est le pere de l’insecurité- la corruption- les vols perpetrés illegalement par l’Etat. Son « protégé » hery a bien suivi l’exemble pour ne pas dire que l’eleve a dépassé « le prof ».
Précédent Article précédent : RAVALOMANANA MARC : NANOME FITAOVANA NY TVM SY RNM AHO TAMIN’IZAY FA TSY MILAZA HOE ALAIVO NY LICENCE MBS
Suivant Article suivant : Magro Behoririka : vontosy mbs ny elankelan-trano